Itephu yegumbi lokuhlambela
Iipani zokuqhekeza kunye nomchamo
Ingcebiso ngokuthenga utsalela ngaphandle ityhubhu yasekhitshini
Ukutsala itephu yamanzi ekhitshini kuyathandwa kwintengiso yasekhaya kule minyaka isixhenxe okanye mininzi idlulileyo. Iyaguquguquka kwaye igubungela uluhlu olubanzi kunombhobho wendabuko. Njengoko igama libonisa, itepu yasekhitshini isetyenziswa ekhitshini ukuthelekisa isink. Utshintsho lombala lwetephu yasekhitshini luhambelana kakhulu ...
Yintoni iWall Mountet?
Umbhobho oseludongeni kukungcwaba umbhobho wonikezelo lwamanzi eludongeni, kwaye uqondise amanzi kwisitya sokuhlambela okanye usike ezantsi kwibhanti yombhobho wodonga. Umbhobho ozimeleyo uzimele, kwaye isitya sokuhlambela / isinki sizimele. Isitya sokuhlambela okanye isinki akufuneki ithathele ingqalelo indibaniselwano yangaphakathi nefafa ...
Umsebenzi weHardware eseKhitshini yeKhabhinethi
ngomphathi ku 21-09-09
Iintsapho ezininzi aziqhelanga ukusebenzisa iinkonkxa ezihleliweyo zenkunkuma kwaye zivakalelwa kukuba inkunkuma kwikhabhathi iyanencasa. Kodwa ngaba inkunkuma inuka kakubi ekhitshini? Okanye ngaba oku kugwetywa kusekelwe kukungawuthathi inkunkuma kangangeveki? Ngaphandle koko, kukho izigqubuthelo ngokubanzi kwikhabhinethi. Ukucoca kwangexesha ...
Isixhobo seKhabhinethi yeKhitshi
Ikhabhathi yekhabinethi yentsimbi yahlulwe yentsimbi esisiseko kunye nokusebenza kwezixhobo. Elokuqala ligama eliqhelekileyo leqela lehenjisi kunye nesilayidi sikalayidi, kwaye elokugqibela ligama eliqhelekileyo lezixhobo ezisetyenzisiweyo ezinje ngokutsala indawo yokugcina izinto zebhasikidi. Ikhitshi izixhobo ezisisiseko zekhompyuter ezisisiseko ngokubanzi kubandakanya: h ...
Shining Glass Basin
ngomphathi ku 21-09-02
Xa kuthelekiswa nesitya sokuhlambela esiqhelekileyo sodongwe, olu hlobo lwesitya sokuhlambela alunabukhazimli bucocekileyo kunye nombala oqaqambileyo, kodwa ikwanazo nezinto ezibonakalayo zeglasi ecacileyo, ecwebezelayo, ekungekho lula ukondla iintsholongwane kwaye inezibonelelo zokucoca ezifanelekileyo . Ke ngoko, ...
Uyikhetha njani ibha yokuhlamba ye-ionic
Iintloko zeshawari ezingalunganga ze-ion zithandwa kakhulu phesheya. Ngaba uyazi ukuba zeziphi iintloko zeeshoni ezingalunganga? Nguwuphi umsebenzi owahlukileyo wentloko yeshawa ye-ion? Makhe ndinazise namhlanje. Ishawa ye-Negative kukudibanisa ilitye le-Maifan, i-tourmaline kunye ne-ion engeyiyo kwisibambo sokungena kwamanzi ...
Kutheni Uthanda Shower Stainless?
Ishawa engenazintsimbi yenye yezona mvula zisetyenziswa kakhulu kubomi bethu bemihla ngemihla. Ngenxa yokuba intsimbi engenasici inempawu ezininzi, iintsapho ezininzi zikulungele ukusebenzisa ishawa yentsimbi. Ukongeza, ziziphi izibonelelo zeshawa yentsimbi engenasici? Makhe sichaze izibonelelo ezingenasici ...
Ubume bohlobo ngalunye lweComputer
Ukuba ufuna ukusebenzisa ikhabhinethi ixesha elide, i-countertop ibaluleke kakhulu! Itafile yekhabinethi eqinileyo, ehlala ixesha elide kwaye intle iya kusenza sizive singalunganga xa sipheka. Kodwa abahlobo abaninzi abazi kakhulu malunga ne-countertop yekhabhinethi, kwaye kaninzi abazi ukuba bakhethe njani. Namhlanje, masi ...
Ukuhlelwa koMnyango weKhabhinethi
Iingcango zeKhabhinethi zihlelwa yimpahla: iphaneli yokuhombisa ephindwe kabini, ipleyiti ebunjiweyo, ipeyinti yokubhaka ipeyinti, umnyango wentsimbi yekristale, ipleyiti ye-acrylic kunye nembasa eqinileyo yomthi. Iphaneli yokuhombisa ephindwe kabini, oko kukuthi, ibhodi ye-melamine, i-substrate ihlala iyibhodi yamasuntswana, kwaye umphezulu uyi-melamine veneer. Izinto eziluncedo: t ...
Kutheni Sithanda Ilitye Elenziwe Ngesitendi?
Izinto eziphambili zelitye le-sintered ngumgubo welitye wendalo kunye nodongwe. Eyona nto ibalulekileyo, lilitye elishinyeneyo. Ikhutshwa yinkqubo yokucinezela ye-10000 yeetoni kubushushu obuphezulu ngaphezulu kwe-1200 ℃. Zeziphi izibonelelo ngelitye le sintered? Resistance Nxiba ukuxhathisa kunye nokumelana ne-Mohs yobulukhuni o ...
Ukuthelekiswa kweComputer yeKhabhinethi eyahlukeneyo
Imiphezulu yeetafile yabanye abantu ibikhazimla kwaye icocekile intsha kwiminyaka elishumi. Nokuba ngaba ziiphephethi zombala wokukhanya okusemoyeni kunye nokukhanya okanye imiphezulu yeetafile zombala omnyama ozolileyo kunye nobuhle, kugxilwe ekubeni ukunganyangeki kokungcola ayingombala, kodwa yinto ebonakalayo. Ukusuka ngo-2012 ukuya ku-2019, abantu abaninzi ...
Ibhlokiwe kunye neMoldy kwiKithen yeKhabhinethi
Umjelo ophantsi komhlaba ohambisa amanzi amdaka ekhitshini uvalekile kwaye uyatshona. Umbhobho wogutyulo wesinki yekhitshi uyavalwa, yingxaki eqhelekileyo. Emva kokuba ukuvalwa kombhobho kusenzeka, kufuneka kutsalwe kwangoko, kungenjalo kuya kubangela ukugcwala kwelindle. Umbhobho welindle uyavalwa. Ngokubanzi, ingqiniba ivaliwe, oko kukuthi, i-p ...